Fil d'actualités du 19/11/2018
19/11/2018 - 12:30 : MARC RAVALOMANANA: Tonga nisaotra ny vahoaka tany Fenoarivobe ny tenany androany, ary nampanantena fa vonona tanteraka amin'ny fihodinana aharoa.
19/11/2018 - 11:00 : HCC: Rahampitso 20 novambra ny fe-potoana farany hahafahana mametraka fitoriana momba ny fifidianana filoha fihodinana voalohany eny amin'ny HCC, hoy ny eo anivon'ity andrim-panjakana ity.
19/11/2018 - 10:30 : TAOM-PIOTAZANA LODISIA: Misokatra anio 19 novambra ny taom-piotazana lodisia any amin'ny faritra Atsinanana sy Analanjirofo. Tsara ny vokatra tamin'ny.
19/11/2018 - 10:00 : LISI-PIFIDIANANA: Ny lisitra nampiasaina tamin'ny fihodinana voalohany ihany no hampiasaina amin'ny fihodinana faharoa fa tsy afaka manokatra izany CENI, hoy ny mpampaka-teny Fano Rakotondrazaka.
18/11/2018 - 14:15 : MARC RAVALOMANANA: Tonga manohana ny Barean'i Madagasikara hifandona amin'i Soudan eny Vontovorona ny tenany izay nandeha angidim-by nakeny an-toerana.
17/11/2018 - 20:00 : Voka-pifidianana filoham-pirenena vonjimaika navoakan'ny CENI: >Andry Rajoelina 39,19% >Marc Ravalomanana 35,29% >Hery Rajaonarimampianina 8,84% >Pasteur Mailhol 1,27%
17/11/2018 - 15:30 : VOKA-PIFIDIANANA: Fanambaran'ny CENI ny voka-pifidianana vonjimaikan'ny fifidianana Filoham-pirenena novambra 2018 , anio asabotsy 17 novambra amin'ny 6 ora hariva. Alefa mivantana ao amin'ny Televiziona Malagasy sy ny Radio Nasionaly Malagasy.
17/11/2018 - 13:30 : MBOLA RAJAONAH: Namoahana didy fampisamborana ny tenany rehefa tsy namaly ny antson'ny Bianco omaly. Ahiana ho misy ambadika politika ny raharaha.
16/11/2018 - 11:30 : BAOLINA KITRA: Efa nigadona eto Madagasikara omaly ny ekipam-pirenena Soudanais hiatrika lalao miverina amin'ny Barea de Madagascar, fifanintsanana hiatrehana ny CAN 2019 any Cameroun.
16/11/2018 - 11:00 : KABARY: Anio 16 Novambra 2018 no Fankalazana ny ivon'ny faha-55 taona ny FIMPIMA izay tanterahina eny amin'ny Akademia Malagasy Tsimbazaza. Nandritra ity fankalazana androany ity ihany koa no nanendrena ireo birao foibe FIMPIMA mandritra ny 4 taona ho avy.
Archive du 20180509
Datim-pifidianana Mailo ny CENI
Miangavy ireo tompon'andraikitra politika isan-tsokajiny miaraka amin'ireo rehetra izay mahatsiaro fa manana adidy amin'ny tanindrazana ny Vaomiera Mahaleotena misahana ny fifidianana na ny CENI, mba hiara-kidinika ka handray fanapahan-kevitra ao anatin’ny fotoana faran’izay fohy hametrahana ny fitoniana.
Fampihavanam-pirenena Mitodika any amin’ny FFKM ny maso rehetra
Nandalo ny CRN sy ny FFM ary ny CFM fa dia saika kiana niraisan’izay naneho ny heviny rehetra hatrany ny hoe « Mandany volam-panjakana ». Etsy an-kilany anefa ny avy eo anivon’ny fiombonan’ireo fiangonana kristianina malagasy na ny FFKM
Depiote ho an’ny fanovana “Ny filoha asaina mitory raha sahy”
Tsy miato ary tsy hiato ny tolona eny an-kianja raha tsy miala i Hery Rajaonarimampianina, araka ny toromariky ny depiote ho an’ny fanovana. Ny minisiteran’ny asam-panjakana sy ny lalàna sosialy, ny mpiasan’ny antenimierandoholona no navoaka omaly.
Fizirizirian-dRajaonarimampianina Fambolena korontana sy krizy
Tombontsoa ambonin’ny firenena ny fialan-dRajaonaonarimampianina ka hisaorana ny solombavamhoakan’ny fanovana sy hanohanany azy ireo, hoy ny fikambanana Olona Hasin’ny Tany na ny OHT teny amin’ny Le Pavé Antaninarenina,
Toe-draharaha politika Tsy maintsy horavana ny governemanta…
Lalana iray mety hampitony kely ny toe-draharaha politika amin’izao fotoana izao ny fandravana ny governemanta.
Fihetsiketsehana an-dalambe Ho avy indray ny fanakanana ?
Namoaka toromarika ho an’ireo tompon’andraiki-panjakana momba ny fihetsiketsehana an-dalambe omaly ny minisitry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier.
Fomba fitantanan’ny HVM Mampisafoaka tanteraka ny Malagasy
Na dia nisy ary ny fahasahiranan’ny vahoaka Malagasy hatramizay dia tsy azo oharina velively amin’ny fahantrana nentin’ity fitondrana ity izany.
Antoko Madagasikara Vina sy Fanantenana Nametra-pialana tsy ho filoha intsony i Guy Maxime Ralaiseheno
Nametra-pialana tsy filoha mpitarika ny “Antoko Madagasikara Vina sy Fanantenana” Andriamatoa Guy Maxime Ralaiseheno ary tsy ho mpikambana mpanorina intsony ihany koa.
Fanolorana fiara ny minisiteran’ny Indostria Miezaka manatsara tena ny fitondram-panjakana
« Mba hiditra misimisy kokoa amin’ny orinasa goavana na « industrie lourde » isika, hoy ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier omaly nandritra ny lanonam-panolorana ireo fiarakodia « Karenjy –Mazana II »
Fikambanana Vokovokomena Mitombo isa hatrany ireo mpilatsaka an-tsitrapo
Vonona hatrany ny hanohana ny mpiara-belona ny fikambanana Vokovokomena Malagasy. Raha araka ny fanazavan’ny taleny Randriananja Claude tamin’ny mpanao gazety omaly mantsy dia mitombo isa hatrany ireo mpilatsaka an-tsitra-po tonga manome tanana azy ireo.
Mazava sy tsy miolaka ny tenin’ny eny an-kianja, fa tsy misy vahaolana afatsy ny fialan’ny filoha. Miantefa any amin’ny fitondrana io, ary mipaka any amin’ny mpanelanelana ihany koa, fa tsy hifampiraharaha sy hifampiresaka amin’ny mpamono olona, hoy ny depioten’ny fanovana.
Sekoly any ambanivolo Maro ny mpianatra mbola mipetraka amin’ny tany
Mbola betsaka amin’ireo sekoly any amin’ny toerana lavitra andriana amin’izao no tsy manana dabilio hampiasaina fa mipetraka amin’ny tany ny mpianatra.
“Radion`ambanivolo” Revy misandrahaka io, hoy i Samoela
Namoaka ny rakikirany fahafolo indray i Samoela, mitondra ny lohateny ”Radion’ambanivolo” izay novokarin’ny tranom-mpamokarana Be Mozika.
Fampiroboroboana ny sehatry ny kolontsaina Hanampy antsika ireo parlemantera miteny Frantsay
Vonona ny hanampy an’i Madagasikara amin’ny fampiroboroboana ny sehatry ny kolontsaina eto amintsika ny fianakaviam-ben’ny frankofonia amin’ny alalan’ireo parlemantera.
Ambano-Antsirabe Notafihin’ny jiolahy indray ry Masera
Notafihin'ny jiolahy indray ny alin'ny alatsinainy hifoha ny talata ny Tobin-dry Maseran'ny Lasalety tao Ambano, izay toeram-piompiana sy fambolena. Jiolahy niisa fito ary nitondra basy kilalao sy kibay no nanafika azy ireo.
Tsy hitsahatra raha mbola misy fitarainana voaray avy amin’ny sendika, raha ny nambaran’ny depiote Horace Rasoanoromalala omaly mikasika ny tolon’ny solombavambahoakan’ny fanovana.
Vidim-piainana miakatra andro aman’alina Velon-taraina ny tokantrano Malagasy
Miakatra andro aman’alina ny vidim-piainana eto amintsika. Raha somary nahitana fihenany kely ny vidim-bary dia any amin’ireo kojakoja fampiasa amin’ny fiainana andavanandro indray no tena ahitana izany toy ny menaka, ny siramamy, ny savony…
Mpisehatra ara-barotra Manomboka mailo manoloana ny krizy
Hita ho kaodikaody be ihany ny mpanao hetsika ara-barotra manoloana ny krizy politika misy eto Madagasikara. Rehefa fotoana manakaiky ny fetin’ny reny tahaka izao dia maro no mamandrika toerana hanaovana dokambarotra, araka ny tatitry ny tompon’andraikitra iray.